दुप्चेश्वरका युवाले कमाउँछन् कृषि फार्मबाटै वार्षिक ८ लाख रुपैयाँ - अखबार पाटी
दुप्चेश्वरका युवाले कमाउँछन् कृषि फार्मबाटै वार्षिक ८ लाख रुपैयाँ
समाचार डेस्क २८ आश्विन २०७७, बुधबार ११:१४
असोज २८, नुवाकोट ।
एउटा साना किसानले कुखुरा पालनबाटै वार्षिक ८ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छन् भन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ । तर, यो साँचो हो । जिल्लाको दुप्चेश्वर गाउँपालिका वडा नं. कि दुप्चेश्वर ७ स्थित ठूलोखेतमा कर्मथलो बनाएका सुनिल तामाङ कुखुरा पालनबाटै आर्थिक हैसियत सुधार्ने युवा हुन् । उनी ठूलो परिमाणमा लेयर्स कुखुरा पाल्ने सम्भवतः दुप्चेश्वरकै अग्रण किसान हुन् ।
उनी बाहेक दुप्चेश्वर ३ सरमथलीका अर्का युवा रामकृष्ण थापाले पनि लेयर्ससँगै, बाख्रा, तरकारी तथा फलफूलको एकिकृत फार्म सञ्चालन गरिरहेका छन् । थापा पनि तामाङ जस्तै कृषिमै आफूलाई समर्पित गरी आर्थिक हैसियत सबल बनाउने दुप्चेश्वरको युवा हुन् । युवा उद्यमी थापाले पनि कृषि तथा पशुपालनबाट वार्षिक ४ लाख रुपैयाँ भन्दा बचत गरिरहेको बताउँछन् । उनि भन्छन, ‘लहैलहैमा मात्र यो क्षेत्रमा आउने हो भने लगानी डुब्न सक्छ । त्यसैले यो काम गर्छु भन्ने संकल्प हुनुपर्छ । व्यावसायीक योजना सहित मनले अठोट गरेर लगानी गर्ने हो भने सफल भइन्छ ।’
लामोे सयमदेखी कृषिलाई नै आफ्नो कर्म क्षेत्र बनाएका उनले व्यावसायीक योजना सहित २०७५ सालमा शिखादेवी कृषि फार्म दर्ता गरेर व्यवसाय गर्दै आएका छन् । सुनिल र रामकृष्णबाहेक दुप्चेश्वरमा अरु पनि थुप्रै व्यावसायिक किसन छन्, जसले कृषिबाटै जिवनस्तर उकासेका छन् ।
यस्तो छ सुनिलको ‘प्रभात पोल्ट्रि फार्म’
२०७५ सालबाट कुखुरा पालनमा होमिएका सुनिल तामाङले २०७६ सालमा ५० लाख रुपैयाँको कुल पूँजी सहितको कृषि उद्योग दर्ता गरे । प्रभात पोल्ट्रि फार्म एण्ड एग सप्लायर्स नाम राखेर लेयर्स कुुखुरा पालन सुरु गरेका सुनिलले स्थापनको २ वर्ष भित्रमै करीब ८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका छन् । यदि कोरोनाको महामारी हुँदैनथ्यो भने यो वर्ष अझै राम्रो हुने उनको अपेक्षा थियो ।
हाल सुनिलको फार्ममा २ हजार लेयर्स कुखुरा छन् । पहिलो लट अण्डा थाक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । भने दोस्रो लटका करीब ५० प्रतिशत कुखुराले अण्डा दिन थालिसकेका छन् । यो महिना भित्रमा ९० प्रतिशत अण्डा उत्पादन सुरु भइसक्ने उनको भनाई छ । हाल तामाङले अण्डा थाकेका कुखुरा विक्रीमा पठाउने तयारी गरिरहेका छन् ।
प्रभात पोल्ट्रि फार्म एण्ड एग सप्लायर्सले कुखुरा पालनका साथै, अण्डाको बजारीकण गर्छ । फार्म परिसरमै उनको अण्डा विक्री कक्ष पनि छ । भर्खरै मात्र तामाङले प्रभात पोल्ट्रि सप्लायर्सको नामबाट दाना तथा चल्लाको सप्लाईको काम पनि थालेका छन् ।
दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको वडा नं. ६ स्थित समुन्द्रटारमा सप्लाई केन्द्र स्थापना गरेका तामाङले आगामी दिनमा लेयर्स कुखुरा पालनलाई अझै बढाउने योजनामा छन् । परिवार सहित कुखुरा पालनमा होमिएका सुनिल कृषि उद्योग सञ्चालन गर्दा तीन किसिमबाट फाइदा हुने बताउँछन् । पहिलो स्थानिय क्षेत्रमा हुने अण्डा तथा कुखुराको माग सम्बोधन हुन्छ, भने दोस्रो फाइदा भनेको स्थानिय स्तरमा रोजगारीको अवसर सृजना हुनु हो । त्यसैगरी लगानीकर्तालाई हुने आर्थिक मुनाफा अर्को फाइदा हो ।
धेरै किसानहरु लगानी समेत उठाउन नसकेर व्यवसायनै छाड्ने गरेको देखिन्छ, तपाईं कसरी मुनाफा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा तामाङ भन्छन्, ‘मैले व्यवसाय सुरु गर्दा सबैभन्दा पहिला स्थापीत कन्सल्ट्याण्टको सहयोगमा व्यावसायीक योजना बनाएर लगानी गरेँ । योजना जसरी बनाइएको हो त्यसैगरी काम गर्दै जाँदा सोचे अनुरुपकै आम्दानी भइरहेको छ ।’
प्रभात पोल्ट्रि फार्मले कुखुरा पालनसँगै अण्डाको बजारीकरण समेत आफैँले गरेका कारण पनि अपेक्षित लाभ लिन सकेको हो । आफ्नो उत्पादनको बजारीकरण समेत आफैँ गर्ने भएका कारण बिचौलियाको भर पर्नु नपर्ने मात्र नभई खुद नाफा समेत बढ्ने तामाङको भनाई छ ।
लेयर्स कुखुरा पालनको आफ्नै विशेषता छ । लेयर्स कुखुरा सामान्यतया एक पटक चल्ला हालेपछि साढे दुई वर्षसम्म उत्पादन दिन्छ । लगभग ५ महिना पुगेपछि सुरु हुने अण्डा उत्पादन त्यसपछिको १९ देखि २० महिना सम्म निरन्तर चलिरहन्छ । अण्डा थाकेका कुखुरा भने प्रतिगोटा स्थान र समय अनुसार ३५० देखी ४५० रुपैयाँसम्ममा विक्री हुन्छ ।